Uyitshisa njani idiski yedatha kunye noNero | Iindaba zeGajethi
A Ngamanye amaxesha kuyenzeka ukuba sifuna ukutshisa i-DVD enemigangatho emibini enedatha, kodwa ukuba ungqimba oluphindwe kabini asikwazi
uyitshise ngqo kwi-DVD enye. Kwezi meko sinokwenza izinto ezimbini: nokuba singacinezela idatha ngesoftware yokucinezela ukuya
emva koko utshise iifayile ezixineneyo okanye ukwahlula iifayile kwi-DVD engqimba ephindwe kabini kwiiDVD ezimbini eziqhelekileyo. Ngeli xesha siza kubona ukuba kuya kwenziwa njani
NSifuna isoftware yokurekhoda ukurekhoda idiski yedatha kwaye njengoko isihloko seli nqaku siqhubela phambili, siya kuthi
ukusebenzisa inkqubo Nero. Ukuba awunayo, unokuzikhuphela kuyo
apha Olu hlobo lusimahla kangangeentsuku ezili-7, emva koko kuya kufuneka ulibhalise ukuba ufuna ukuqhubeka ulisebenzisa. Ngapha koko, ukuba uNero akasebenzi kuwe, unokujonga ezi nkqubo zokutshisa iifayile okanye imifanekiso ye-ISO. Kulungile
1) Faka inkqubo ukuba awukayifaki okwangoku kwaye uyivule uza kubona le skrini ilandelayo apho kuya kufuneka uyenze
Cofa kwi icon emele iphepha kwaye ejikelezwe, emfanekisweni, ngesangqa. Ngale ndlela sinokufikelela kwimenyu ye
2) Kumfanekiso ongezantsi ungabona ukuba iskrini sitshintshe njani emva kokucofa iphepha. Sifuna ukurekhoda njani
KwiDVD yedatha kuya kufuneka sikhethe ukhetho "Yenza idatha yeDVD" ngokunqakraza kwi icon ejikelezwe sisangqa.
3) Emva kokucofa u "Yenza iDVD yeDatha" kuya kuvela le festile ilandelayo.
4) Kuya kufuneka ujonge kwikona esezantsi ekunene kwaye ujonge ukuba loluphi uhlobo lweDVD olukhethiweyo. Siya njani
utshise idatha kuluhlu olunye lwe-DVD (4,7 GB) emva koko ucofe utolo oluncinci ngasekunene uze ukhethe "DVD5 (4483MB)".
5) Nje ukuba uhlobo lweDVD lukhethwe, cofa kwindawo ethi "Yongeza".
6) Kwiwindow elandelayo siza kuhamba kwikhompyuter yethu de sifumane iDVD drive apho ufake khona ifayile ye
Uluhlu oluphindwe kabini kwiDVD. Cofa kanye kuyo kwaye ucofe ku «Okulandelayo».
7) Iifayile eziza kurekhodwa ziyavela kwiscreen, kodwa njengoko ubona kulo mfanekiso ulandelayo, kuba yiDVD ye
indawo ekuyiwa kuyo enomthamo ongezantsi kune-DVD enemigangatho emibini, sifumana isilumkiso ngohlobo lwe-bar ebomvu ebonisa ukuba kukho idatha egqithisileyo.
8) Njengoko besicwangcise ukurekhoda idatha kwiiDVD ezimbini, into esiza kuyenza kukucofa kwenye yeefolda kwaye
cofa kwi «Cima» iqhosha. Oku akuyi kuzicima iifayile kwi-DVD yoqobo, iya kuzisusa kuluhlu olushushu, ukunciphisa i
ubungakanani bebonke beefayile ezirekhodwayo.
9) Inkqubo izakukucela ukuba ufuna ukucima izinto ezikhethiweyo, cofa ku "ewe" kwaye ujonge indlela i
ibha. Ukuba sele uluhlaza ungaqala ukurekhoda, kodwa ukuba isabomvu kuya kufuneka uqhubeke nokususa iifayile.
9) Njengoko sibona kumfanekiso ongaphambili, ibha ibonakala iluhlaza ukuze sicofe ku «Okulandelayo» kwaye iya kuvela
iwindow yokukhetha isishicileli. Kwi ummandla 1 Ukusuka kumfanekiso ongezantsi kufuneka ukhethe enye yeerekhodi ozifakileyo kwifayile yakho ye-.
ikhompyutha. Kwi ummandla 2 unganika idiski yakho igama. Igama elivela ngokwakhona yi "My Disk". Kwi ummandla 3 ukuba ujonga
"Jonga idatha kwidiski emva kokurekhoda" ibhokisi ekupheleni kokurekhodwa, inkqubo iya kuhlalutya idiski erekhodiweyo kwaye ikuxelele ukuba idatha
ikope ngempumelelo. Oku kuthetha ukuba inkqubo iyonke ihlala ixesha elide kuba ixesha lokurekhoda kufuneka longezwe kwi
khangela. Ndikucebisa ukuba ujonge le bhokisi ukuba awuzukufikelela kulwazi olurekhodayo kwakhona, ngale ndlela uya kuqinisekisa ukuba
ikopi ibe intle.
10) Ukuba siphawula ibhokisi yokukhangela ye ummandla 4
Siza kushiya idiski ivulekile ukurekhoda kwimisebenzi emininzi. Asiyi kuyiphawula kule meko. Into esiza kuyenza kukuya kwifayile ye- ummandla 5 y
cofa kwityolo elincinci lokuzisa le window elandelayo.
11) Kwiwindow yangaphambili sinezinto ezininzi esinokukhetha kuzo kodwa siza kujonga kuphela indawo ephawuliweyo yokuseka ifayile ye
isantya sokurekhoda. Kuya kufuneka uyazi ukuba idatha irekhodwa kwidiski ngamanqaku enziwe nge-laser kumaleko wediski, ke ngoko
ngokukhawuleza isantya sokurekhoda, eyona nto inzima ngumsebenzi ekufuneka yenziwe ngumqambi we-laser yakho. Ndikuxelela oku kuba
Ukukhetha kwam kukuseta isantya esisezantsi sokurekhoda esivunyelwa sisishicileli sakho okanye umonde wakho. Emva kokukhetha, cofa ku «Okulandelayo».
12) Njengoko kubonwe kumfanekiso ongaphambili, ukurekhodwa kuqalile. Ubude benkqubo buya kuxhomekeka kwisixa se
idatha erekhodiweyo kunye nesantya sokurekhoda esikhethe kwinqanaba elingaphambili. Emva kwethutyana kwaye ukuba yonke into ihamba kakuhle, oku kulandelayo kuya kuvela
ENdiyathemba ukuba le "Nyathelo ngenyathelo" ngendlela yokutshisa iDVD yedatha kunye noNero iluncedo. Ndizokubona ngokukhawuleza!!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Uyitshisa njani idiski yedatha kunye noNero
Ungandixelela ukuba siphi isantya sokurekhoda, andazi ukuba ndingasihlengahlengisa njani kwaye ndicinga ukuba ndirekhoda ngokukhawuleza kwaye ezinye iikopi ziye zasilela. Ndiyithandile iwebhu, imibuliso.
Molo mhlobo, ndiyintsha kule nto kodwa ndinengxaki, ndine:
Xa ndifuna ukuzibona imovie, ndizirekhoda kwenye ye-dvd ehlengahlengisiweyo kwaye kukho ii-movie ozimamelayo kunye nezinye ezingazenziyo, kutheni izakuba njalo? Ngaba iya kuba sisantya sokurekhoda? Andinangxaki, ukuba ungandiphendula mfondini
Hola ipokolo okwenzekayo kuwe ngokuqinisekileyo akungenxa yesantya sokurekhoda. Xa urekhoda ii-discs ngesantya esiphezulu, ukurekhodwa kungasilela okanye idiski ayinakudlala kwisidlali, kodwa hayi ividiyo nevidiyo ayinakuviwa. Ndicinga ukuba iya kuba yingxaki ngefomathi yeaudiyo, ezinye ziya kuba kwifomathi ehambelana negumbi lakho lokuhlala kwaye abanye abayi kuyenza. Ukubulisa.
Molo mhlobo ndinengxaki encinci andikhumbuli ukuba ndingarekhoda njani iimovie xa ndiphume kwigumbi lokutshisa le-nero, ndicinga ukuba ndenza onke amanyathelo kodwa xa ukurekhoda kugqityiwe kwaye ndibeka i-dvd umva ukuba ibhalwe kakuhle indixelela ukuba i-dvd ayinanto, andazi ukuba xa ndikhuphela imovie kwi-emule ndingazirekhoda ngqo kwi-nero okanye kufuneka ndenze enye into, kulungile, ukuba ungandiphendula, enkosi
Molo Alex, kuya kufuneka ukhumbule ukuba xa uthi ukhuphele izinto kwimeyile ndicinga ukuba azizukushicilelwa, abanamalungelo okushicilela okanye ukuba bacingelwe ngaphakathi kwilungelo lekopi yabucala kwaye unayo Kuba ukusukela apha asixhasi ubugqwetha, ndiyaqonda ukuba uyayiqonda into endiyithethayo.
Xa ukhuphela imovie ngeMule kufuneka ubone ifomathi eza ngayo, kwaye ngokuxhomekeke kuyo kuya kufuneka uyirekhode ngandlela thile. Umzekelo i-dvdRip eqhelekileyo inokurekhodwa ngokuthe ngqo njengedatha yedatha, ukuba nje umdlali wakho wamkela i-divx, nangona kunjalo i-dvd epheleleyo, eneefayile ze-.vob, kuya kufuneka uzitshise njengevidiyo ye-dvd. Konke okugqibelele.
molo javi ti ndenza umbuzo ndifake i-nero 6 ngaphambi kokuba ndenze umfanekiso kwaye ndibagcine kwi-dvd kwaye ndingayidlala kwikhaya lam le-dvd ngoku ukusuka kolunye usuku ukuya kolunye i-nero yenza umfanekiso we-grba kulungile kodwa xa uyifaka Isidlali sasekhaya i-dvd SANDIBEKA IDVD (NDIYAYIVAVANYA KWI-COMPU KUNYE NEREKHODI EZIPHAKAMILEYO) KWENZEKA NTONI XA NDITHINTSHE INTO KULUNGELO OKANYE KWENZEKA NTONI? UKUSUKA ENKOSI KAKHULU !!! UKUGQIBELA
Micky, ngaba ulutshintshile uphawu lweDVD? Ezinye iiDVD ezingabizi kakhulu zirekhodisha ulwazi kodwa zinengxaki ezininzi zokudlala.
Ndizama ukwenza ugcino lwedatha (kubiza kakhulu, ke ukuba iDVD yonakele…).
Iza kuluhlu oluphindwe kabini lwe-DVD, okanye ndiyaqokelela kuba ifolda ine-7,9gbs. Ayikhuselwanga, ke ndiyikopa kwi-hard disk ngaphandle kwengxaki. Kodwa xa ndizama ukutshisa i-DVD engqimba kabini, ndiye ndifumanise ukuba ithatha ngaphezulu kwe-DVD enye (8-odd, ngaphezulu kokusebenza kweDVD). Andikwazi ukuyigcina kubini, kungenjalo isiseko sedatha asizukuqhuba ...
Ngaba ukhona umntu ocinga ukuba kutheni kunjalo, okanye indlela yokusombulula?
Molo Vicente ukuba ujonga kwisifundo uza kubona ukuba kwinqaku lesi-4 kuya kufuneka ulumke xa ukhetha phakathi kwe-dvd9 okanye i-dvd5, ukuba ufuna ukutshisa i-dvd ephindwe kabini kufuneka ukhethe ukhetho lokuqala (dvd9) kwaye uya kuba nakho ukurekhoda ngaphezulu kwe-9 gigs. Zama ukubona ukuba isebenza njani kwaye isebenzela wena, ndincoma ukuba wenze enye ikopi yokulondoloza kwimeko yeempukane. Konke okugqibelele.
UDiego Becerra sitsho
Ewe ndiyithande iwebhu, mhlobo olungileyo, ndingathanda ukwazi ukuba ndinombuzo
Kulungile mhlobo wam, ndiyayithanda newebhu kakhulu, kodwa ndinombuzo oya kuthi undisombulule wona, ndifuna ukwenza kemali dvd ephindwe kabini kwilaptop yam, ndifuna ukwahlulahlula ibeyi-2 ko-1 umaleko kodwa ps inyani ukuba iyaphatheka, kuvela ukuba ndinerekhoda kuphela oko kukuthi ndine-dvd drive kuphela ... Ungandixelela ukuba ndingenza ntoni ukukopa i-dvd ye-8gbs kwi-2 ye-4gbs inomfundi omnye kuphela?
UDiego yeyiphi inkqubo yokurekhoda oyisebenzisayo kwaye loluphi uhlobo.
hehe ndisebenzisa i-nero 7.9.6 Ndizamile ukukhuphela i-q ikule webhusayithi kodwa ikhonkco laphukile, i-ps ikwinguqulelo efanayo.
Hee, ikhona into ondixelela yona? yena yena
Diego, iqulathe ntoni iDVD, idatha okanye imuvi?
eeeeeeee unomdlalo we-Xbox 360, andazi ukuba yintoni leyo
Uxolo Diego kodwa andazi ukuba irekhodwa njani le midlalo. Kwaye, nokuba bendiyazi, andizukuyibeka. Ubuqhetseba abuxhaswanga kule bhlog. Ukubulisa.
Ungandixelela ukuba ndenza njani ukwenza iikopi ezi-5 ngexesha elinye lediski enamacala amaninzi ngaphandle kokuphinda ndilayishe idatha nganye kwidiski, oko kukuthi bonke bahlala kuluhlu oluninzi
Ngaba akwanelanga ukuba ukhethe inani leekopi?
Ewe, inyani kukuba iyamangalisa, kokokuqala ndibona i-gig cd ye-4,7.
Molo, ndinombuzo omkhulu we-rookie, kuba ndinguye. Ndizikhuphele iimovie kwii-ares, kwaye xa ndizama ukuzidlulisela kwi-CD nero ndiyabona ukuba azilingani kwiCD. Ndijonge into ekuyo ifilimu kwaye ndiyabona, umzekelo 700MB, umzekelo kunye ne-cd yam yi-4.7GB…. Ngaba ayothusi kakhulu? Enkosi!!!!!
Ndifumene ibhlog yakho ekhangela uncedo kuNero 7.9, kodwa ndicinga ukuba umbuzo sele ucacisiwe 😉
Enkosi kakhulu ngoncedo lwakho nexesha, ukuvuyela ibhlog yakho!
Enkosi mhlobo, siphantse saba lilizwe. Konke okugqibelele.
Molo, umbuzo wam umalunga nezinye iimuvi ezikwi-avi endinayo kwi-hard drive yam.
Xa ndizama ukuzifaka kwi-4.7 DVD, azizilingani zonke, kuba zihlala kum i-4998 mb, ngaba ikhona into enokwenziwa ukuyicinezela okanye ukubanyanzela ukuba bangene kwiDVD?
Soto kufuneka uphinde ubeke enye kwifilimu kwaye uyicinezele ngakumbi.
Molo VINEGRE, NDIQOPHILE KWI-DVD IMIFANEKISO YOMCULO KUNYE NEEVIDIYO KODWA KE IIVIDIYO AZI KUZA KUM, ABANYE BANDIXELELA UKUBA AZIQHELEKI FOMATI KANYE ABANYE BANGANDIVULI NGQO. IDVD? NGENXA yokuba ndingakhange ndiyibeke ku-4483 KODWA NDINGAYI KUYILUNGISELELA NGOKUPHELELWA KWENYE IMALI EPHUMILEYO.
UYesu yingxaki yefomathi, kukho iifomathi ezingamkelwa ngu-nero kwaye kuya kufuneka uphathe enye yazo. Kuya kufuneka uguqulwe kuqala.
SIYABULELA NGOKUTHATHA IXESHA UKUSUSUSA KWINGXAKI "ENTSHA"
andiboni 99m cd-r. sitsho
Ndine-99m cd-r. kwaye andiyiboni kwi-dvd yedesktop yam. Ndirekhode imovie ene-nero esivuthayo kwaye yarekhodwa kakuhle ndinenye i-700mb cd-r, kwaye ndiyababona. Ndicela undixelele ukuba yintoni ingxaki!
Ingxaki yokuhambelana, iDVD yakho ayikulungelanga ukufunda ii-disc ezinkulu kangaka. Inokwenzeka nakwabanye abafundi.
molo umbuzo bandithengele isidlali sanv dvd ndinayo incwadana yemigaqo kunye nezinye, kulungile ndithathe iifoto ezimbalwa kunye nekhamera yam ndizikhuphele kwaye ndifuna ukudibanisa idvd ukuze ndikwazi ukuyibona kodwa ndiyazi ¿?? ? ngoba???
molo muhisimas enkosi !! inyani yayiyile nto bendiyifuna
Inkcazo elungileyo kakhulu !!!
Ndiyakholelwa ukuba ukuthandabuza kwam KULULA KAKHULU UKUBA NOKUBA UNGASOMBULULA KUM !!
KHUPHELA I-DVDRIP FILM AND IFOMAT .AVI, NDIBONE KWIMPENDULO YAKHO UKUBA NDINOKUYITSHISA IFILIMU KWI-DATA CD NE-DVD LIYINYANISO LE, IBHAYIBHILE IKWIMGANGALO OWULUNGILEYO ????
Ndingayikopa njani kwenye idiski ndiye kwenye kuphela ngokuba nomfundi, kuba xa ndifaka idiski andikwazi ukuyirekhoda. Ndiyibonile indlela abayenze ngayo kodwa andisayikhumbuli. Kuba babeka idiski kwaye bakhuphela ulwazi, emva koko yakucela ukuba ufake idiski engenanto kwaye uyikope
Molo, jonga, ndifuna ukwenza i-dvd yedatha, ndongeza iifolda, ndiyinika ngokulandelayo, ngokwenyathelo lakho le-9 kumda woku-1 sikhetha isishicileli esinaso kwikhompyuter, kodwa indinika kuphela irekhoda yomfanekiso (DVD) ukhetho kunye neenketho zeqhosha ukundithintela. Ukuba ndine-cd kunye ne-dvd burner (ndenze i-cd yedatha) kwaye ndinokubukela iimuvi zeDVD. Ke ndingenza ntoni? ENKOSI !!!!
Ndizama ukugcina idatha yam yomsebenzi. Nje ukuba inkqubo iqale, ngaxa lithile iyabanda kwaye ayiqhubeki, emva kwethutyana iyaphuma. Ndiqaphele ukuba ngendlela efanayo ikopa idatha, kodwa, andazi ukuba zonke. Ndiqinisekisile ukuba ubude bomendo + wegama lefayile aludluli oonobumba abangama-200 (kubonakala kum ukuba ubuninzi busondele kuma-250), ngaphambili ebendisebenzela, kodwa, kubonakala ngathi eli xesha ayongxaki. Ndingenza ntoni? Ngaba kufanelekile ukuba ndilinde inkqubo ukuba indinike umyalezo wemposiso? Kubonakala kum ukuba ndingabanda okomkhenkce kangangeeyure kwaye ndingenampendulo.
@Jose el Nero unemikhuba emibi yokungaxhomeki ngokungaqondakaliyo. Andinampendulo kwingxaki yakho, uxolo.
Molo! Ndiyifunde ngocoselelo nangocoselelo imibuzo nganye oyiphendulileyo.
Umbuzo wam uthi:
DVD_ apho unokwenza idathabheyisi Kulungile! Ndiyazi kodwa xa ndirekhodisha akukho nto itshintsha umxholo, akunjalo? Kwimeko yokufuna ukurekhoda umtshato owawungowomakazi wam (ividiyo) kwaye wahlulahlula ngeefolda, akunjalo? kwaye yeyiphi ifomathi eqhelekileyo efundwa ngumdlali weDVD okanye ngaba i-NERO iyongeza kwifomathi?
Ukususela sele enkosi kakhulu!
Hayi! Inguqulelo yeNERO yam ngu-8
Abadlali abadala beDVD bafunda kuphela iifayile zeDVD, kodwa ukuba yeyangoku, phantse zonke zifunde i-DIVX kwaye ukuba urekhoda iividiyo njengedatha uya kuziqonda, ukuba iividiyo zinokwandiswa kweavi.